पाँचथर हत्याकाण्ड : 'एक जना मात्र’ संलग्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण र बालिकाले दिएको बयानका आधारमा एक जनाबाहेक अरुको संलग्नता रहेको शंका गर्ने अवस्था छैन ।’
जेष्ठ १०, २०७६ माधव घिमिरे, लीलाबल्लभ घिमिरे
विराटनगर — पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेमा चार दिनअघि ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट एक जना मात्र संलग्न रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटनास्थलको अध्ययन, स्थानीय बासिन्दासँग सोधपुछ, प्राप्त प्रमाण संकलन गरेको छ ।
पाँचथरको आरुबोटेमा बिहीबार बमबहादुर फियाक परिवारको अन्त्येष्टिमा उपस्थित गाउँले र आफन्त । तस्बिर : कान्तिपुर
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार घटनास्थलमा भेटिएका वस्तु संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि काठमाडौं मगाइएको छ । ‘घटना बीभत्स र ठूलो भए पनि हत्यामा संलग्न पहिचान भइसकेको छ,’ पोखरेलले बिहीबार साँझ फोनमा भने, ‘घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण र बालिकाले दिएको बयानका आधारमा एक जनाबाहेक अरूको संलग्नता रहेको शंका गर्ने अवस्था छैन ।’
सोमबार राति बमबहादुर फियाकसहित उनको परिवारका चार जनाको हत्या भएको थियो । बमबहादुरका ज्वाइँ धनराज सेर्मासहित परिवारमा पाँचजनाको हत्या भएको थियो । सबैलाई धारिलो हतियारले टाउको र शरीरमा क्षतविक्षत हुने गरी काटिएको थियो ।
हालसम्मको अनुसन्धानमा देखिएअनुसार घटनाको एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी १२ वर्षीया सीता खजुम हुन् ।
उनी घटनाका बेला भाग्दै छिमेकी घरमा शरण लिएर बाँच्न सफल भएकी थिइन् । भाग्ने क्रममा लडेर घाइते भएकी उनको झापा, दमकस्थित अस्पतालमा प्रहरीको सुरक्षामा उपचार गरिएको छ । उनले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार कपडाले अनुहार छोपेर नचिनिने गरी आएको एक जना व्यक्तिले धारिलो हतियारले पालैपालो परिवारका सबैलाई प्रहार गरेका थिए ।
हत्यामा संलग्न आशंका गरिएका व्यक्ति बमबहादुर फियाकका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिम हुन् । उनी घटनास्थलभन्दा करिब डेढ घण्टा पैदल दूरीमा पर्ने मिक्लाजुङ–७ लिम्बा गाउँमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए ।
केही स्थानीय बासिन्दाले मानबहादुर ‘डिप्रेसन’ बाट ग्रसित रहेको बताएका छन् । उनले औषधि सेवन गर्ने गरेको भनिए पनि कुन औषधि भन्ने खुलेको छैन । मिक्लाजुङका एक जनप्रतिनिधिका अनुसार उनी केही समययता अनौठो व्यवहार गर्ने, निराशजस्तो देखिने गरेका थिए ।
पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले धरानबाट आएको एसएपीसहितको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर फर्केको बताए । ‘मसहितको टोली एक रात घटना भएको गाउँमा बसेर फर्केका हौं,’ वस्तीले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा बाहिर चर्चामा आएका व्यक्ति (मानबहादुर) नै संलग्न भएको अनुमान छ ।’ घटनास्थलमा भेटिएका कतिपय वस्तुको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वस्तीले तीन दिनभित्र सबै रिपोर्ट बाहिर आउने जानकारी दिए ।
पाँचथरको प्रदेशसभा ‘ख’ का सांसद एवं प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्क्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अनुसन्धानमा सबै शत्ति लगाइएको बताए । उनले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि सबैसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको जनाए ।
के गर्दै छ सीआईबी ?
काठमाडौं– एसपी उमा चतुर्वेदी नेतृत्वको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घटनास्थलमा प्राविधिक सबुत संकलन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार ब्युरो टोलीले शंकास्पद भनिएका मानबहादुर माखिमको मानसिक अवस्थाको इतिहास, घटनाअघिका दिनहरूमा उनका गतिविधि र उनको संगत केलाउने प्रयास गरिरहेको छ । ब्युरोले उनले प्रयोग गर्ने मोबाइलको कल डिटेल निकालेर अनुसन्धान थालिसकेको छ भने घटनास्थलमा भेटिएको धारिलो हतियार र त्यसको फिंगर प्रिन्ट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
एसपी चतुर्वेदीले प्राविधिक पक्षबाट घटनाको पुष्टि गरेपछि मात्रै थप तथ्य बाहिर ल्याउन सकिने बताए । ब्युरोले पनि घटनामा मानबहादुरको संलग्नता हुन सक्ने बलिया आधारहरू फेला पारेको छ । ब्युरोले मानबहादुरको विगत, उनको पछिल्लो मानसिक अवस्था र पत्नीसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । हत्याका घटनामा मानबहादुरलाई अरू कसैले उकास्ने भूमिका खेलेको थियो कि भन्नेमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार मानबहादुरले केही महिनायता मानसिक रोगसम्बन्धी औषधि सेवन गरिरहेको बताए । उनले प्रत्येक दुई–दुई महिनामा विराटनगरबाट औषधि ल्याएर खाने गर्थे ।
मलेसियामा तीन वर्ष रोजगारी गरेर फर्केपछि मानबहादुरले २०६८ मा विवाह गरेका थिए । विवाहपछि दुई वर्ष मानबहादुर घरमै बसेका थिए । ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार मानबहादुरकी श्रीमती मनकुमारीले जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी थिइन् तर एकको अस्पतालमै र अर्कोको केही दिनपछि घरमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि मानबहादुर कतार गएर दुई वर्ष बसेका थिए । कतार बसाइका बेला श्रीमती मनकुमारीसँग सम्बन्ध बिग्रेको थियो ।
प्रहरी बयानका क्रममा केही छिमेकीले मानबहादुरले शंका गर्ने त्रम बढेपछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको बताएका छन् । ‘उनीहरूबीच अविश्वास र आरोपप्रत्यारोप बढेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय मनकुमारीले जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।’
कतारबाट फर्केपछि माइत गएकी श्रीमती फर्काउन नसकेपछि र अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भएपछि मानबहादुर विक्षिप्त बनेका थिए।
केही साथीसँग मानबहादुरले सम्बन्धविच्छेदपछि सम्पत्ति पनि जाने बताएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ‘सोझो र एकोहोरो मान्छे भएकाले प्रतिशोध साध्न घटना गराएको हुन सक्छ,’ ब्युरोका एक अधिकारीले भने ।
छोरीलाई घर जिम्मा
पाँचथर– सोमबार राति हत्या गरिएका ९ जनाकै बिहीबार अन्त्येष्टि गरिएको छ ।आरुबोटको चिहानडाँडामा बमबहादुर, बिर्छाहाङमा, मनकुमारी फियाक र आशिका खजुमलाई एउटै चितामा राखेर अन्त्येष्टि गरिएको थियो । धनराज, जस्मिता, युहाना, मुना र इक्सा सेर्माको मिक्लाजुङ–२, सराङडाँडामा अन्त्येष्टि गरिएको हो।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष अमर माखिमका अनुसार बमबहादुरको घर उनका जेठी छोरी दिलमाया र साइली छोरी बुद्धिमायालाई प्रहरीले जिम्मा दिएको छ । घटनापछि प्रहरीले घर घेराबारा गरेको थियो । धनराजको घर भने आफन्त सराङडाँडामा रहेकाले प्रशासनकै सुरक्षामा रहने भएको छ । वैशाख ३० गते धनराजको घरमा नुनको बट्टामा सिसाका कण भेटिएको विषय अनुसन्धानमा गम्भीरता नअपनाइएको स्थानीयले बताए । ‘नुन काण्डमा गम्भीर अनुसन्धान भइदिएको भए सोमबारको घटना हुने थिएन कि,’ स्थानीय भानु फियाकले भने ।
धनराजकी श्रीमती जस्मिता ढाका बुनाइसम्बन्धी तालिम दिइरहेकी थिइन् । उनले तालिमका सहभागीलाई खाजा खुवाउने क्रममा नुनमा सिसा मिसिएको पाइएको थियो । नुनमा सिसा मिसाएको आशंकामा धनराजले कान्छा साडुभाइ मानबहादुर माखिमविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरीसमेत गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:२०
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : लाखमा किनेर करोडमा बिक्री
जेष्ठ १०, २०७६ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — त्रिताल प्रतिवेदनले ‘भूमाफिया’ किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर झन्डै एक करोडका दरले बेचेको भेटिएको छ ।
‘काठमाडौं छिर्दा छिँडीको कोठामा निर्वाह गर्ने आर्थिक हैसियतका दुवैजना केही वर्षमै कान्तिपथको ५/७ रोपनीमा फैलिएको घरजग्गा आँट्ने हैसियतमा पुगेका थिए,’ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो बीचमा उनीहरू अनेक छल, तिकडम, राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा खेल्न थाले र सरकारी जग्गा हत्याए ।’ दुवैजना हाल फरार छन् । उनीहरूसँग जोडिएका कतिपय सरकारी अधिकारीसमेत अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि फरार छन् ।
०४९ सालमा सरकारले जफत भएको भन्ने व्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा केही राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको थियो । रुक्मशमशेरहरूले जग्गा फिर्ता पाउँदा मोहीको लगतसहितको जग्गा पाएका थिए । मोहीहरूले पनि त्यही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र माग गरिरहेका थिए । सुवर्णशमशेरका सन्तानले जग्गा फिर्ता पाएपछि त्यसमा जोडिएका मोहीलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर तत्कालीन एमालेका केही नेता दौडधुपमा लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘उनीहरूले मोही संरक्षणको नारा लगाएर हिँडेका थिए, मोही दाबी गर्नेहरूले राणाहरूको भाग हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दै विभिन्न ठाउँमा दौडधुप बढाएका थिए,’ बालुवाटार जग्गाबारे जानकार राणा परिवारका एक सहयोगीले कान्तिपुरसँग भने, ‘लेखनदास रामकुमार सुवेदीले उनीहरूको लिखत र निवेदन तयार गर्थे ।’
मोहीहरूलाई त्यतिबेला शोभाकान्त ढकालले बोकेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ३३० नम्बरको लेखनदासको प्रमाणपत्र लिएका रामकुमार सुवेदी डिल्लीबजार मालपोतको पीपल चौतारामा बसेर घुँडामा नेपाली कागज राखी लेखापढी गर्थे । जग्गाको अनेक खेलमा लागेका ढकाल कामविशेषले मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ सुवेदीसँग भेट भयो । केहीबेरको कुराकानीमै ढकाल सुवेदीसँग घुलमिल भए । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबी स्रोतका अनुसार कहाँनिर कसरी खेल्नुपर्छ भनेर ढकालले तत्काल चाल पाइहाले अनि रामकुमारलाई साथ लिएर अघि बढे ।
मुआब्जाबापतको रकम लिइसकेका रुक्मशमशेरहरूले सित्तैमा जग्गा पाएर दोहोरो लाभ लिएका थिए । मोही पनि जोडिएको लिखत भेटिएपछि उनीहरूमा लोभ पलायो । सामूहिक रूपमा मोही छुटाउनुपर्ने माग राखी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । उनीहरूले मोही दाबी गर्नेहरूलाई त्यही जग्गामा मोहीको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग राखी भूमिसुधार कार्यालयमा सामूहिक निवेदन दिन लगाए ।
भूमिसुधारले राणा परिवारको नाममा फिर्ता भएको जग्गामा मोही कायम हुने निर्णय गरिदियो । रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन गए । पुनरावेदनले पनि भूमिसुधारकै निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म ढकाल र सुवेदीले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए । राणा परिवार नजिकका एक पूर्वप्रशासकको भनाइमा ‘तिमीहरूलाई राणाले सिध्याउँछन् र नाङ्गै हुन्छौ’ भनी धम्क्याएर मुद्दा जिताएबापत आधा सम्पत्ति आफूहरूलाई दिन दबाब दिए । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीको आधा भाग मोहीले पाउँथे । मोहीलाई करकापमा पारेका शोभाकान्त र रामकुमारहरूले मुद्दा जितेमा ‘आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने’ लिखत गराएका थिए । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई राणा परिवार निर्णय खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालत गए । त्यसक्रममा भूलवश राणाहरूले तारिख टुटाए र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा खारेज भयो । ललिता निवासको जग्गाबारे अनुसन्धान गरिरहेको एक स्रोतको भनाइमा ‘यति भइसकेपछि मोहीको भागमा पर्ने बाँकी जग्गासमेत उनीहरूले कौडीको भाउमा हत्याए ।’
शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले दिएर ‘बुकिङ’ गरेका थिए । मोहीहरूसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले कागज गरेका थिए, मोहीले जितेको अवस्थामा त्यसको आधा मात्रै तिरे पुग्ने भएको थियो । स्रोतको भनाइमा ‘जसले जिते पनि आफ्नै भागमा पर्ने गरी उनीहरू खेलेको देखिन्छ ।’ कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनकशमशेर हुन् । उनका छोरा हेमाद्रीशमशेरका साढुभाइ पर्छन् अमरशमशेर जबरा । उनी नेपालको पहिलो गभर्नर हिमायलशमशेरका छोरा हुन् । ‘खासै लाइन नलिएका’ भनेर छवि बनाएका उनको सम्पर्कमा भू–माफियाको उपाधि पाएका रामकुमार सुवेदी थिए ।
त्यसपछि चारजनाको समूह भयो । हेमाद्रीशमशेर, उनका साढुभाइ अमरशमशेर, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी मिलेर जग्गा फिर्ता पाएकाराणा परिवार र उनीहरूबाट भाग पाएका मोहीकोजग्गा उठाउने अनि धमाधम बेच्नका लागि बैना लिने काम गरे ।
ती पूर्वप्रशासकको भनाइमा ‘बेच्नेसँग कुरा छिन्न बाँकी भएकै अवस्थामा किन्नेलाई यो जग्गा हाम्रै हो भनेर बैना उठाउने काम भयो ।’ त्यतिबेला एक चर्चित जग्गा व्यापारीले पनि बालुवाटारको जग्गा खरिदमा निकै रुचि देखाएका थिए तर पटकपटक ‘डिल’ नमिलेपछि उनलेछाडेर हिँडे ।
उनीहरूले राणासँग रोपनीको १६ लाख अनि मोहीसँग रोपनीको ८ लाखका दरले जग्गा किने । मुद्दा मिलाएमा आधा आफ्नो भाग हुने भनेकाले मोहीले मोलको आधा रकम मात्रै हात पारे । त्यसको केही समयमै उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई त्यो जग्गा ८० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीसम्ममा बेचे । यो करिब ०६० सालको कुरा हो ।
सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले राजस्वका २२ जना अधिकृतको घरमा एकसाथ छापा मारेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएको थियो । २२ भाइमध्येका भनेर चिनिने एक पात्र हुन्, डोलराज शर्मा ।
स्याङ्जाका यिनै डोलराज भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका भित्रिया रहेको सीआईबी स्रोतले बतायो । पुर्ख्यौली स्याङ्जाकै रहेका ढकालले डोलराजमार्फत भाटभटेनीका मीनबहादुरसँग सम्बन्ध बढाए अनि मिलेमतो र साझेदारीमा जग्गा खरिदको काम भयो । त्यसक्रममा मीनबहादुरले रोपनीको एक करोडका दरले जग्गा किने । स्रोतको भनाइमा मीनबहादुरले केही कित्ता भने निकै सस्तोमा पाएका थिए ।
बालुवाटारबाट व्यक्तिको नाममा गएको मध्ये करिब २५ रोपनी जग्गा तीन परिवारको नाममा थियो । उक्त जग्गा भूमाफिया भनेर चिनिएका ढकाल, गुरुङ र उनीहरूको परिवारका नाममा फेला परेको थियो । व्यापारी गुरुङले आफ्नो परिवार र कम्पनीको नाममा समेत जग्गा खरिद गरेका छन् । बालुवाटारको सबैजसो किक्ताको खरिदबित्रीको ट्र्याक रेकर्डमा उनीहरूको नामजोडिएको देखिन्छ ।
बालुवाटारको जग्गा दुई चरणमा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको कागजातबाट देखिन्छ । पहिलो चरणमा प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै सुवर्णशमशेरको हरण भएको जग्गा फर्काउने नाममा अधिग्रहण भएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा फिर्ता भएको थियो । दोस्रोपटक प्रधानमन्क्री निवास विस्तारका त्रममा मोही व्यवस्थापन गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको थियो । दुवैपटकको खेलमा डा. ढकालका साथै मालपोतका लेखनदासका रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी सुवेदी प्रयोग भएको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार, ‘यी दुईका साथमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पनि सामेल भए, जसमाथि पूरै राजनीतिक साथ र भरथेग थियो ।’ गुरुङको नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालसँग नजिकको सम्बन्ध छ ।
जग्गाधनीबाट सस्तो दरले खरिद गरेको जग्गा एक करोड रुपैयाँका दरले बेच्दा ढकाल र सुवेदीले निकै नाफा कमाइसकेका थिए । यही बीचमा भाटभटेनीबाट मीनबहादुर उदाए । मोहीको आधा जग्गा सित्तैमा लिएर बेच्दा ढकाल र सुवेदीले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ कुम्ल्याएको अनुमान छ । त्यसपछि शोभाकान्तले कुमारी बैंकको सेयर खरिद गरे र सञ्चालकसमेत बने ।
यिनीहरूले त्यही रकमबाट कान्तिपथमा ५ रोपनीमा फैलिएको भवन खरिद गरे । प्रहरीका अनुसार सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि ढकाल कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट राजीनामा दिई फरार भएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:१७